Dagaal Duleedka Ceerigaabo Ku Dhex Maray Somaliland Iyo Jabhada Caare – Ilays News
[ October 23, 2019 ] Maxkamada Sare Ee Somaliland Oo Laashey Xeer Nimaadiye Ka Soo Baxay Wasaarada Wax Barashada	Featured
[ October 23, 2019 ] Afhayeenka Madaxtooyada Oo Qoraal Warqad Ku Qoran Ugu Jawaabey Gudoomiye Ciro + [ Muuqaal ]	Featured
[ October 23, 2019 ] Erdogan Iyo Putin Oo Gaadhay Heshiis Ka Dhan Ah Kurdiyiinta	Featured
[ October 23, 2019 ] China Oo Casuuntay Wafdi Taliban Ah	Featured
[ October 23, 2019 ] Dowladda Soomaaliya Maxay Ka Tiri Hadalkii Ka Soo Yeeray Safiirka Mareykanka Ee Kenya?	Featured
Dagaal Duleedka Ceerigaabo Ku Dhex Maray Somaliland Iyo Jabhada Caare
July 10, 2019 admin1
Wararka laga helayo magaalada Ceerigaabo ayaa sheegaya in ciidamada qaranka somaliland ay dagaal kula jiraan jabhadii Kornayl Caare oo soo gaadhay deegaanka Dhoob oo 45km dhinaca bari kaga beegan magaalada Ceerigaabo.
Dagaalkan ayaa yimid ka dib markii ay ciidamada qaranka somaliland hor istaageen jabhada kornayl Caare oo doonayey inay dhufays dagaal ka samaystaan buurta Daallo isla markaana ay galaan aaga ka ag dhaw buurtaasi.
Dagaalka oo socda awgii Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ay iskaga horyimaadeen ciidamada Somaliland iyo kooxda uu hogaamiyo Col Caare.
Sidoo kale wararka ka imanaya magaalada Ceerigaabo ayaa sheegaya in rabshado ay ka socdaan gudaha magaalada Ceerigaabo, waxaanay wararku sheegayaan in Ciidamada amaanku ay rasaas u adeegsanayaan shacabkaasi si ay u kala eryaan oo xaalada magaaladu ay caadi ugu soo noqoto.
Dhinaca kale xukuumada somaliland ayaan ilaa hada ka hadal colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanka Ceel Afweyn iyo dagaalada dhexmaraya kooxda Kornayl Caare iyo ciidamada qaranka somaliland